Amazon တွင် လုံခြုံစွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနည်း | စီးပွားရေးဘဏ္ဍာရေး
Amazon တွင် လုံခြုံစွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနည်း
Encarni Arcoya | 29/12/2021 12:15 | အဆင့်မြှင့်တင် 29/12/2021 15:43 | စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
Amazon သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူသိများသော နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည် သန်းပေါင်းများစွာသော ဖောက်သည်များကို အနိုင်ယူရန် သူ၏လုပ်ငန်းကို စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။ မကြာခဏ ဝယ်ပေးလို့ရပါတယ်။ သင်မသိနိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ Amazon မှာ ဘယ်လို လုံခြုံစွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလဲ။ ဟုတ်တယ်၊ မင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့ရတယ်။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအကြောင်းပြောတဲ့အခါ လူအများစုက စတော့ကိုဝယ်ဖို့စဉ်းစားကြပြီး၊ ဒါက နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်၊ သင်သိထားရမယ့်အချက်အနည်းငယ်ရှိပါသေးတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ Amazon မှာ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ့် ရွေးချယ်စရာတွေကို ပေးရုံသာမက သင်ဘာကြောင့်လုပ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေကိုလည်း ဇယားမှာတင်ပါမယ်။
1 Amazon မှာ ဘာကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာလဲ။
1.1 ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒါဟာ အနာဂတ်မှာ အကောင်းဆုံး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်လို့ပါပဲ။
1.2 Amazon သည် အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုထက်ပိုသည်။
1.3 Amazon သည် eCommerce ကဏ္ဍကို လွှမ်းမိုးထားသည်။
1.4 Amazon ၏ ရှယ်ယာများသည် ဆက်လက်မြင့်တက်နေဦးမည်ဖြစ်သည်။
2 Amazon တွင် လုံခြုံစွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနည်း
2.3 Amazon ဖြင့် Dropshipping
2.4 ဆက်နွယ်မှုဖြင့် Amazon တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
Amazon မှာ ဘာကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာလဲ။
2022 မှာ Amazon ဟာ ပြောင်းလဲတော့မယ် ဆိုတဲ့ အခြေခံကနေ စတင်ရပါမယ်။ ပိုကောင်းတာ ဒါမှမဟုတ် ပိုဆိုးတာဖြစ်နိုင်တယ်။ သို့သော် Jeff Bezos ၏နောက်ဆက်ခံသူသည် Amazon ကိုဖန်တီးသူကဲ့သို့အရည်အချင်းပြည့်မီပါက၊ အချိန်တန်သောစီးပွားရေးရှိနေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သံသယမရှိပါ။ အမှန်မှာ၊ ၎င်းသည် အွန်လိုင်းမှ ဝယ်ယူရုံသာမကဘဲ တဖြည်းဖြည်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (ဆေးဆိုင်များ၊ စူပါမားကတ်များ၊ စသည်) များကိုပါ လွှမ်းမိုးလာမည်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့် Amazon မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ အကြောင်းအရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်၊ ငါတို့မူကား၊
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒါဟာ အနာဂတ်မှာ အကောင်းဆုံး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်လို့ပါပဲ။
အရင်ကပေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကြောင့်ပါ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိ အထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သည် အနားယူချိန် သို့မဟုတ် ထွက်ခွာသွားသောအခါတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးတွင်ကဲ့သို့ပင် မသေချာမရေရာမှုတစ်ခု ရှိနေသည်မှာ မှန်သော်လည်း အရာအားလုံးသည် ဆိုးရွားနေမည်မဟုတ်ပေ။
အမှန်တော့ လုပ်ရမှာ Amazon ကို 1994 တွင်ဖန်တီးခဲ့ပြီး 27 နှစ်ကြာတွင်၎င်းသည်ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။တစ်နေ့ကို ယူရိုသန်းပေါင်းများစွာနဲ့ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Amazon စတော့ရှယ်ယာများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသောကြောင့် လအနည်းငယ် သို့မဟုတ် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် အရှိန်အဟုန်ကြီးကြီးမားမားရရှိသွားနိုင်ပါသည်။
Amazon သည် အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုထက်ပိုသည်။
တစ်ခုခုဝယ်ရတဲ့အခါ ပထမဦးဆုံးရာထူးမှာ search engine မှာ ဘာရလဲ။ အမေဇုန် ၎င်း၏အနေအထားသည် ထုတ်ကုန်များကို မှာယူရန် Amazon သို့ ဦးစွာသွားသူ သန်းနှင့်ချီရှိနေပြီဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် သင်အနည်းငယ်ပိုပေးချေရပါက အရေးမကြီးပါ (အချို့ကိစ္စများတွင် ဤကိစ္စမျိုးဖြစ်သည်) အရာအားလုံးကို သင်ရှာဖွေနိုင်သည့်စတိုးတစ်ခုရှိခြင်းသည် ၎င်းကိုအွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုမျှသာမဟုတ်တော့ပါ။ အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီ၊ ဂီတ၊ စီးရီးနှင့် ရုပ်ရှင်များအတွက် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခု ပါရှိသောကြောင့်၊ ၎င်းတွင် ဓာတ်ပုံသိုလှောင်မှုပါရှိသည်...
သင့်ကိုအကြံဥာဏ်ပေးရန် NASA ကိုယ်တိုင်က Amazon နဲ့ cloud computing အခြေခံအဆောက်အအုံကို စာချုပ်ချုပ်ထားပါတယ်။
Amazon သည် eCommerce ကဏ္ဍကို လွှမ်းမိုးထားသည်။
အစပိုင်းမှာတော့ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် စျေးကွက်တစ်ခုလုံးနီးပါးနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း လုပ်ဆောင်ပြီး အရောင်းပြပါတယ်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယင်းကို သတိပြုရမည်ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းရောင်းအား ဆက်လက်တိုးလာခြင်း၊ ၎င်းတို့သည် လာမည့်နှစ်အနည်းငယ် သို့မဟုတ် ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
စျေးကွက်ဝေစုအရ၊ 2021 တွင် Amazon သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အွန်လိုင်းရောင်းချမှု၏ 50% ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်ပြီး၊ ဤကိန်းဂဏန်းသည် ဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
Amazon ၏ ရှယ်ယာများသည် ဆက်လက်မြင့်တက်နေဦးမည်ဖြစ်သည်။
ငါတို့က မပြောပေမယ့် ဒါကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ဘဏ္ဍာရေး လေ့လာသုံးသပ်သူတွေပါ။. ဖြေဆိုသူ 50 (Wall Street လေ့လာသုံးသပ်သူများ) မှ 48 ဦးက အမြတ်ရရန် Amazon ရှယ်ယာများကို အမြန်ဆုံးဝယ်ယူရန် အကြံပြုထားသည်။ ထို့အပြင်၊ Amazon နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူမျှ အဆိုးမြင်ခြင်းမရှိ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ Wall Street မှာ အများကြီးဖြစ်မလာပါဘူး။
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ သင်သည် Amazon တွင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံရန် နည်းလမ်းရှာနေသောအခါတွင် ၎င်းသည် သင့်အား ရှယ်ယာများဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော တစ်ခုတည်းသော ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်သည်။ သို့သော် လက်တွေ့တွင် ၎င်းသည် တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ နိုင်မလား Amazon တွင်အလုပ်လုပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ (၎င်းသည် တည်ငြိမ်သောအနေအထားဖြစ်နိုင်ပြီး သင့်အားလုံခြုံရေးပေးသည်ဆိုသည်ကို သင်သိသောကြောင့်) သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော အဆိုပြုချက်အချို့ဖြင့်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ပထမဆုံးထိတွေ့ရမည့်အရာဖြစ်သည်၊ သို့သော် သင်ဘာလုပ်နေသည်ကို သင်သိပါက ဤအရာကို ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိုပါသည်။ စတော့ဈေးကွက်မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံတာဟာ စတော့ဝယ်တာမဟုတ်ဘူး ဒါပဲ။ သင်လောင်းကစားနေတဲ့ ကုမ္ပဏီကို ဘယ်အချိန်ဝယ်ရမလဲ၊ ဘယ်အချိန်ရောင်းရမလဲဆိုတာ သိထားရပါမယ်။ ထို့အပြင်၊ သင်ငွေအများကြီးရှာနိုင်သည်နှင့်အမျှ၊ သင်ငွေအများကြီးဆုံးရှုံးနိုင်သည်ကိုသတိရပါ။
Jeff Bezos သည် စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်တွင် အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ချမ်းသာကြွယ်ဝသော်လည်း ဦးခေါင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်မှာ မှန်ပါသည်။
Amazon ရှယ်ယာများသည် ယခုဈေးကြီးနေသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ဆက်လက်မြင့်တက်နေဦးမည်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကိုဝယ်ရန် အမြတ်ကျန်နေဆဲဖြစ်သည်။ 2010 မှာ သင်သူတို့ကိုဝယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်0ကနေ အမှတ်အနည်းငယ်တက်လာတဲ့အခါ စိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါ။ အခု 2000% ထက်ပိုပြီး သင်ဟာ သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်လာမှာပါ။ သို့မဟုတ် နီးပါး။
Amazon တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် အခြားနည်းလမ်းမှာ သင့်လုပ်ငန်းမှတစ်ဆင့် ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, သင်၏ eCommerce ရှိခြင်းအပြင်၊ သင်သည်နောက်ထပ်ဖောက်သည်များစွာထံရောက်ရှိလိမ့်မည်။တခါတရံ သင့်မှာ အော်ဒါအရေအတွက် တိုးဖို့ တခြားနိုင်ငံတွေကတောင် ပါပါတယ်။
Amazon သည် အလွန်တင်းကျပ်သောကြောင့် သင်သတိထားရန်လိုပြီး ၎င်းတို့၏စတိုးဆိုင်တွင် Amazon ပေါ်လာခြင်းအတွက် ကော်မရှင်များကို ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့် အရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို ဂရုစိုက်ရမည်ဖြစ်ပြီး (တစ်ခါတစ်ရံ သင့်တွင် အရောင်းများပါက လျော်ကြေးပေးသည်)။
Amazon ဖြင့် Dropshipping
ဒါကို သင်သိမှာ သေချာပေမယ့် Amazon က ဒီဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနေတာ မဟုတ်ဘူး။ Amazon FBA ဆိုသည်မှာ Amazon မှ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း သို့မဟုတ် အတူတူပင်ဖြစ်သည်၊ သင်သည် သင်၏ထုတ်ကုန်များကို Amazon ဂိုဒေါင်များသို့ ပေးပို့ပြီး ၎င်းသည် အခြားအရာအားလုံးကို တင်ဆောင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် အမိန့်ပေးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးသူ ဖြစ်လာသည်။
Amazon သည် တာဝန်ယူမှု (ယခင်ရွေးချယ်မှုတွင်ကဲ့သို့) အစား၊ ဤနေရာတွင် ၎င်းသည် ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာပြီး သင့်တွင် တာဝန်ရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ခွဲတမ်းက ပိုမြင့်နိုင်ပေမယ့် သင့်မှာ အမှာစာတွေ အများကြီးရှိရင်၊ အဲဒါက အလားအလာရှိတဲ့ ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆက်နွယ်မှုဖြင့် Amazon တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
အမှန်မှာ၊ ၎င်းသည် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ SEO အများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ဘလော့ဂ်များနှင့် ဝဘ်ဆိုက်များကို ငွေရှာရန် အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သတင်းစာ စာမျက်နှာများပင်လျှင် (Amazon ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ဆောင်းပါးများကို ကြည့်လျှင် ၎င်းတို့တွင် ကုဒ်တစ်ခု ဆောင်ထားသည်ကို တွေ့ရလိမ့်မည်။ ထိုလင့်ခ်ကို အသုံးပြု၍ ဝယ်ယူမှုတိုင်းသည် အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သတင်းစာ၊ စာမျက်နှာ၊ ဘလော့အတွက် ...)
သင်အများကြီးမနိုင်ပေမယ့် ဖြည်းဖြည်းချင်း သင်ကောင်းကောင်းအထွတ်အထိပ်ရောက်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် အနိုင်ရသောမြင်းကို လောင်းကစားလိုပါက၊ ယခု ၎င်းကို မတူညီသောမျက်လုံးများဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး Amazon တွင် လုံခြုံစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနည်းကို တွေးတောနိုင်ပါပြီ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » စီးပွားရေးလုပ်ငန်း » Amazon တွင် လုံခြုံစွာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနည်း
သူတို့သည် ကျွန်ုပ်၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုမဟုတ်သော ပင်စင်ကို သိမ်းသွားကြသည်။